Idphoto4you unciphisa ubungakanani beefoto zePasipoti ekwi-intanethi | Iindaba zeGajethi
Ngaphandle kokuchitha imali, ungalula ngokulula ubungakanani bepasipoti ngokusekwe kuluhlu lwelizwe kunye neefoto ngelixa ifoto ihlelwa. Unokuwutshintsha umfanekiso kwifoto yobungakanani bepasipoti ye-visa okanye nayiphi na enye inkqubo kunye nokuprinta iifoto zobungakanani bepasipoti ekhaya. Konke oku kubulela ekudalweni kweefoto ezilingana kwipaspoti kwi-Intanethi nge IDphoto4You.com oququzelela umsebenzi wabaninzi.
Idphoto4you, Sisicelo sewebhu esikwi-intanethi esilula esivumela ukuba wenze iifoto zepasipoti kunye nobungakanani obuchanekileyo kunye ne-Intanethi ngaphandle kokuchitha imali. Into oyifunayo yikhamera yedijithali, uthatha ifoto, uyilayishe kwaye ulandele amanyathelo enkonzo ye-Idphoto4you ukufumana ifoto yohlobo lwepasipoti.
1 Ungayithatha njani ubungakanani bepasipoti kwiikhamera zedijithali
2 Ubungakanani befoto yokundwendwela eSpain
3 Ngaba ifoto ye-DNI kunye nepasipoti ziyafana?
4 Iifoto zokundwendwela eSpain
5 Ungayiguqula njani ifoto ubungakanani bepaspoti kwi-intanethi (ungathetha ngeeapps okanye iiwebhusayithi)
Ungayithatha njani ubungakanani bepasipoti kwiikhamera zedijithali
Nantsi incam elula, kuya kufuneka ube nemvelaphi emhlophe kwaye ushiye indawo eyaneleyo ejikeleze intloko ukuze utyale umfanekiso. Qiniseka ukuba awunazithunzi ebusweni bakho okanye kwimvelaphi, ikwasebenzisa ikhamera ngobude obufanayo nentloko yakho.
Sukuyeka ukukhuphela esi sicelo esiya kukunceda ukuba ube noluhlu ifoto yakho yepaspoti, kunye nobungakanani ngqo bale nkqubo yezomthetho.
Ubungakanani befoto yokundwendwela eSpain
Iifoto zepaspoti eSpain kufuneka ihlale ihlangabezana noluhlu lweemfuno, esiza kuthetha ngazo apha ngezantsi. Nangona enye yezona zinto zibaluleke kakhulu bubungakanani befoto ekuthethwa ngayo. Njengoko sele uyazi, xa sisiya kwindawo yokuthatha iifoto, nokuba ngumatshini okanye umfoti, kufuneka ichazwe ngalo lonke ixesha ukuba ezi foto zezokundwendwela. Kuba zinobungakanani obuthile.
Kwimeko yeSpain, njengoko kubonisiwe ngurhulumente uqobo, ubungakanani bezi foto kufuneka bube phakathi kwe-35 kunye ne-40mm ububanzi kwaye ngokulinganayo ukuphakama, Oko kukuthi, phakathi kwama-40 nama-53 mm ukuphakama. Ayamkelekanga nangaliphi na ixesha ukuba iifoto zincinci kunale. Ukongeza, kuzo, intloko kunye nenxalenye ephezulu yomzimba kufuneka zihlale phakathi kwe-70 kunye ne-80% yefoto.
Ngaba ifoto ye-DNI kunye nepasipoti ziyafana?
Kwiimeko ezininzi, kukho abantu abathi basebenzise iifoto ezifanayo kula maxwebhu mabini. Mhlawumbi unefoto efanayo kwi-ID yakho nakwipasipoti yakho, ke ngokomgaqo kunokwenzeka. Inyani yile yokuba ixhomekeke kakhulu kwimeko nganye, kuba xa uhlaziya i-DNI, ifoto entsha ihlala iceliwe, eyahlukileyo kuleya idlulileyo. Ukuba uyihlaziyile i-DNI kwaye uza kuyivuselela ipasipoti, kunokwenzeka ukuba baya kukuvumela ukuba usebenzise ifoto ye-DNI. Kodwa ayisiyonto yenzeka kuzo zonke iimeko.
Kwimeko yeefoto ze-ID, kuhlala kumiselwe ukuba ubungakanani kufuneka ube yi-32 nge-26 yeemilimitha. Oku kuboniswa kwiwebhusayithi esemthethweni yoMphathiswa. Kungenxa yoko le nto zihlala zihlala zincinci kunezo zokundwendwela. Kodwa kukho amaxesha xa kunye nefoto esiyisebenzisileyo kwi-DNI bavumela ipasipoti ukuba ivuselelwe.
Iifoto zokundwendwela eSpain
Njengoko besesitshilo ngaphambili, ifoto yokundwendwela ihlala ineemfuno ezithile eSpain. Ukuba ezi mfuno azifezekiswanga, ifoto ayizukusebenziseka kwaye ayiyi kwamkelwa. Yimiba esisiseko, kodwa kubalulekile ukuthobela kuyo nayiphi na imeko, ukunqanda iingxaki ngesithombe esithe. Yintoni ekufuneka uyifezekisile?
Ifoto yamva nje: ayinakuba ngaphezulu kweenyanga ezi-6 ubudala
Intloko kunye nenxalenye ephezulu yomzimba kufuneka ihlale phakathi kwe-70 kunye ne-80% yefoto
Imvelaphi kufuneka ibe mhlophe kwaye ifane
Ifoto kufuneka ibe ngombala kwaye igxile
Kufuneka uprintwe kwiphepha lomgangatho wezithombe
Umntu kufuneka ahambe ejonge ngqo kwikhamera
Amehlo kufuneka avulwe kwaye ukuba iiglasi ziyasetyenziswa kufuneka zenziwe ngeglasi ecacileyo
Iifoto ezinomnqwazi, ikepusi, isikhafu okanye i-visor azamkelwa
Kwimeko yokunxiba isigqubuthelo, kuya kufuneka ububone ngokucacileyo ubuso bakho nakweyiphi na imeko
Kwiifoto zosana ekufuneka zibanjiwe entloko, akukho zandla zinokubonwa zibambe intloko
Ungayiguqula njani ifoto ubungakanani bepaspoti kwi-intanethi (ungathetha ngeeapps okanye iiwebhusayithi)
Ukuba sele unayo ifoto, kodwa ayikho kwifomathi efunekayo, sinokubheja ekuyiguquleni. Ukuze esele sinayo ifoto ehambelana noko basibuza kwipaspoti. Ngenxa yoku, sinokubhenela kumaphepha ewebhu okanye usetyenziso, olusinceda ukuba siguqule ubungakanani. Zininzi iindlela onokukhetha kuzo, kwanokusetyenziswa kwezixhobo ezinjengePeyinti kunokunceda, ukuba sele siyayazi imilinganiselo yokusebenzisa kule foto.
Olunye lolona khetho lugqibeleleyo yiVisafoto, ungandwendwela kule khonkco. Kule webhusayithi kunokwenzeka ukuba wenze iifoto zokundwendwela, i-ID okanye ii-visa ezivela kumazwe amaninzi. Ke iyaziguqula ngokulula kuyo yonke into esiyifunayo ngaloo ndlela. Kufuneka sifake ifoto, enokuba nayo imvelaphi. Ndiyabulela kule webhusayithi siya kuba nakho ukuguqula ifoto ibe ngumfanekiso ogqibeleleyo wepasipoti.
Ukuba into obuyikhangela yayiyinkqubo ye-Android, Kukwakho nezinye iindlela ezikhoyo. Sine-app ebizwa ngokuba yi-ID Photo Passport, onokuthi ngokulula wenze i-ID yakho okanye iifoto zepasipoti. Uhlelo lokusebenza kulula ukuyisebenzisa, kuya kufuneka ulayishe ifoto kwaye uyihlele. Ungayikhuphela simahla kwi-Android apha ngezantsi:
Umhleli wesithombe se-ID sepaspoti kunye ne-visa
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Idphoto4you inciphisa ubungakanani beefoto zePasipoti ekwi-intanethi
UNatán Saavedra sitsho
Enkosi ngenqaku. Ndikhangele apho ndingathatha khona iifoto kumaxwebhu ngexesha lomgama ekuhlaleni. Ngengcebiso yakhe, wasebenzisa ifoto yeVisa. Ukusukela ngoku ukuya phambili, ndiza kuhlala ndithatha ezi foto kwi-Intanethi kuphela, zilunge kakhulu!
Phendula kuNatán Saavedra
UGoogle utyhila zonke iinkcukacha ezisemthethweni malunga neStadia